Umholi we-Leadfeeder: Khomba bese ubala izinkampani ze-B2B ezivakashela isayithi lakho | Martech Zone
I-leadfeeder wuhlelo lokusebenza lwewebhu olwandisa ubuhlakani bakho bokuthengisa ngokuhlanganisa idatha yakho yokuthengisa neyokumaketha, enika amandla inhlangano yakho ukuthola amabhizinisi amasha nokuqapha amakhasimende akhona eza kuwebhusayithi yakho. Ukuhlonza kuhambisana ne-database ecebile yabasebenzi lapho ungathola khona ama-imeyili namaphrofayili omphakathi wabenza izinqumo ngaphakathi kwenhlangano. Leli ithuluzi elihle lamabhizinisi we-B2B ngoba lingakhomba izivakashi ezingaziwa ezinenhloso yokuthenga.
Thola Amathemba we-ABM Avakashele Isiza Sakho
Njengengxenye ye Ukumaketha Okusekelwe Akhawunti (ABM) isu, leli ithuluzi elihle. Njengoba ukhomba, ukhangisa, noma uphromotha imikhiqizo nezinsizakalo zakho ezinkampanini ezithile, ungaxwayisa abasebenzi bakho abathengisayo lapho lezo zinkampani zivakashela iwebhusayithi yakho futhi zibone ukuthi zihlangana kuphi kusayithi lakho. I-Leadfeeder ikuvumela ukuthi uvumelanise uhlu lwama-akhawunti akho ku-Leadfeeder, unikeze impendulo, futhi waziswe ngokushesha lapho bevakashela iwebhusayithi yakho. Ithimba lakho lokuthengisa lingalandelela ngokuqhubekayo ngenhloso.
Usebenzisa i-LeadFeeder Enqubo Yakho Yokuthengisa
Ukusebenzisa ithuluzi elifana naleli kungakhuphula ukugxila kwamaqembu akho ekuthengiseni kumathemba anenhloso ephezulu yemikhiqizo nezinsizakalo zenkampani yakho. Nge-Leadfeeder ne-CRM yakho noma ipulatifomu ye-ABM, inqubo ejwayelekile ingahle ibukeke kanjena:
Isivakashi esingaziwa sifika kuwebhusayithi yakho.
Ngokuya ngezihlungi zebhizinisi ozisethile noma okuqondiwe kwe-ABM okuvumelanisile, omele okuthengisayo waziswa ngomsebenzi.
Uma ungenzi i-ABM, iqembu lakho lokuthengisa lingabheka inkampani bese likhomba ukuthi liyithemba noma cha ngokususelwa kuphrofayili yenkampani yalo.
Uma kuyithemba, omele abathengisi bakho angabe esefuna oxhumana nabo enkampanini eku- I-leadfeeder ukukhomba ukuthi ngubani owenza izinqumo ngaphakathi kwenkampani ongathintana naye.
Ungathumela ngokuzenzakalela ama-imeyili kusuka kusikhulumi sakho sokumaketha esihlanganisiwe noma umthengisi wakho wokuthengisa angathumela uqobo lwakho inothi noma enze usizo lokunikeza ucingo noma ukusetha ucingo lokuthengisa.
Izici ze-Leadfeeder Faka
Imininingwane Yokuxhumana - I-Leadfeeder inikeza ukufinyelela ku-database enamandla yoxhumana nabo. Manje usungaqala ingxoxo ngomzamo omncane.
Okuzenzakalelayo lead amagoli - Imikhondo yakho eshisayo ibekwa ngokuzenzakalela phezulu kohlu lwakho lokuhola ukuze wazi ukuthi ungagxila kuphi ngokulandelayo.
Instant lead Generator - I-tracker yethu iphusha idatha njalo emaminithini ama-5! Ukunikeza ukusakazwa njalo kwamathuba ongawaphishekela ngokushesha nje lapho bengena.
Izaziso Zakho Ze-imeyili - Uma izinkampani ezithile zivakashela iwebhusayithi yakho uzokwaziswa nge-imeyili okusho ukuthi ungalandela isikhathi esifanele.
Ukuzenzekelayo ku-CRM yakho - Uma usuxhume ukuhlanganiswa kwethu okuningi kwe-CRM, noma i-Slack, ku-Leadfeeder yakho, hlala phansi njengoba sithumela ngokuzenzakalela ukuvakashelwa okusha kwepayipi lakho lokuthengisa.
Abasebenzisi Mahhala - Faka abasebenzisi abaningi ngendlela othanda ngayo futhi usebenzise amathuluzi wokuphatha wokuhola we-Leadfeeder ndawonye ukuze inkampani yakho ingalahlekelwa okunye ukuhola online.
Ukucinga Okunamandla - Sesha noma iyiphi inkampani kuLeadfeeder bese ubheka umlando wabo ophequlula ngokuphelele ukuze uthole isithombe esigcwele salokho okubahehayo.
Ukuhlunga Okunhlobonhlobo - Dala futhi ulondoloze zonke izinhlobo zokuphakelwa okunamandla njengezinkampani ezivela ezweni elithile, umkhankaso we-AdWords noma ekhasini elithile lewebhu.
I-Leadfeeder ihlangana ne-Pipedrive, i-Mailchimp, i-Salesforce, I-Hubspot, Zoho, Zapier, Microsoft Dynamics 365, Slack, WebCRM, G Suite, IGoogle Data Studio, neGoogle Analytics.
Qala isilingo samahhala sezinsuku eziyi-14 se-Leadfeeder
Ukudalula: Sisebenzisa isixhumanisi esihambisanayo se- I-leadfeeder kulesi sihloko.
Tags: ukumaketha okusekelwe ku-akhawuntiI-google analyticsisitudiyo sedatha ye-googlegsuiteindawoukuholai-mailchimpimicrosoft dynamics 365I-PipedrivesalesforceukuxegaI-WebCRMzapperI-Zoho